ဆယ်ကျော်သက်ရွယ် စိတ်ကစားလွယ် - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
အောက်တိုဘာ 7, 2019 Assist. Prof. Phongthorn Virojchaiwong, M.D.
ဆယ်ကျော်သက်ကာလများဟာ စိတ်ပိုင်းမှာရော ရုပ်ပိုင်းမှာပါ ပြောင်းလဲမှု အများဆုံးနှစ်များပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အရွယ်ရောက်တဲ့ဘက်ကို ပြောင်းလဲဖို့အတွက် ဟိုမုန်းများစတင် လှုပ်ရှားတက်ကြွတဲ့ အချိန်ဖြစ်လို့ ဒီလို ဆယ်ကျော်သက်နှစ်များမှာ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်အပေါ်မှာ စိတ်ဝင်စားမှုတွေဖြစ်လာကြပါတယ်။ ကိစ္စ တော်တော်များများမှာလည်း မိဘကို အားမကိုးတော့ဘဲ ကိုယ့်ဟာကိုယ် လုပ်ချင်လာကြတော့တာကိုး။
၅၀ ကနေ ၇၀% နှုန်းသောသူများဟာ လိင်အင်္ဂါကြွက်နို့ကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေကနေ ကူးစက်လာကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရာနှုန်းပြည့် သန္ဓေတားပေးတဲ့စနစ်ဆိုတာ မရှိသေးပါဘူး။ ဒါကြောင့် လိင်မှုကိစ္စ ဆိုတာ အချိန်ကိုက် အရွယ်ကိုက် ဖြစ်သင့်ပြီး နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးကလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်လိုကာကွယ်ရမယ်ဆိုတာကို ကောင်းကောင်းသိတဲ့ အရွယ်တွေ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
ဆယ်ကျော်သက်ရွယ် လူငယ်ဘ၀ ဆိုတာကို မိန်းကလေးတွေမှာ ၁၀ နှစ်ကနေ အသက် ၂၀၊ ယောက်ျားလေးတွေကျတော့ ၁၂ နှစ်ကနေ ၂၂ နှစ်လို့ သတ်မှတ်လေ့ ရှိကြပါတယ်။ ဒီအရွယ်အတွင်းမှာ သူဟာ ရုပ်ပိုင်း၊ စိတ်ခံစားမှုပိုင်း၊ စိတ်ကျန်းမာရေးအပိုင်း၊ လူမှုဆက်ဆံရေးရှုထောင့် စတဲ့ ကဏ္ဍတော်တော်များများမှာ အပြောင်းအလဲတွေ အများကြီး ဖြစ်လာရပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်ဆိုတာ တကယ်တော့ ကလေးမက လူကြီးမကျ စကောစက အရွယ် ဖြစ်တာမို့ သူတို့မှာလည်း ဟိုမရောက် ဒီမရောက်ဖြစ်နေကြရရှာပါတယ်။ ဒီကြားထဲ ဟိုမုန်းအပြောင်းအလဲကလည်း အမြန်ဖြစ်နေတာမို့လို့ ကြီးကောင်ဝင်ပြီး မျိုးဆက်ပြန့်ပွားနိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်နေတဲ့ အရွယ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအရွယ်မှာ သူတို့သာ အသစ်အဆန်းကို စမ်းကြည့်ချင်ကြပါတယ်။ ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် လွတ်လွတ်လပ်လပ် လှုပ်ရှားရတဲ့ အပေါ်မှာ ‘စိတ်ခုန်’ နေတတ်တဲ့ အရွယ်တွေပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။
ဒီကနေ့မှာ လူငယ်တွေအကြား “မလိုချင်ဘဲ ရခဲ့တဲ့ ကိုယ်၀န်” ဆိုတာ အရေးတကြီးဆွေးနွေးနေရတဲ့ ‘ကိစ္စ’ ဖြစ်လို့ နေပါပြီ။ ဒါ့အပြင် လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်တဲ့ ရောဂါတွေဟာလည်း အတော်အတန် ပျံ့နှံ့လာနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်လာရတာဟာ လူငယ်တွေအနေနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်လို ကာကွယ်ရမလဲ ဆိုတာကို မသိကြလို့ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်လုပ်လိုက်တဲ့ကိစ္စရဲ့ နောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာနိုင်ခေျတွေကို မတွက်ဆမိဘဲ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေကို လုပ်ဖို့ မေ့မေ့လျော့လျော့ ဖြစ်ခဲ့ကြလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူငယ်တွေအကြားမှာ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ ဘေးအန္တရာယ်ကို လျှော့ချကာကွယ်ပေးပြီး ဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့ လိင်မှုရေးရာအတွက် နည်းလမ်းတွေဆိုတာ အခုအချိန်မှာ အများကြီး ရှိနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အရေးကြီးတာက သူတို့ သိကြဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှလဲ ကာကွယ်နိုင်မှာကိုး…။
လိင်မှတစ်ဆင့်ကူးစက်တတ်သောရောဂါများ (STDs) ဆိုတာ လူတစ်ယောက်ကနေ နောက်တစ်ယောက်ဆီကို လိင်မှုကိစ္စကနေတစ်ဆင့် ကူးစက်လာတဲ့ ရောဂါတွေကို ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုရောဂါပေါင်း မြောက်မြားစွာ ရှိတယ် ဆိုတာကို ဆယ်ကျော်သက်တို့ သိထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နို့မို့ဆိုရင် သူတို့ဟာ ဒီကူးစက်ရောဂါ ဝဲသြဃကြီးထဲမှာ နစ်မှန်းမသိ နစ်မြုတ်သွားပြီး အသက်အန္တရာယ်အထိ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လိင်မှုရေးရာကတစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်တဲ့ ရောဂါအချို့ကို သိနိုင်ကြစေဖို့ ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။
Chlamydia (the clap) ဂနိုကြောင့်မဟုတ်ဘဲ အခြားပိုးကြောင့် ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ရောင်ရမ်းခြင်း။ ပေါင်ခြံမှာ အကျိတ်တွေထွက်လာတတ်ပါတယ်။
Trichomoniasis or “trich” ဆီးပူညောင်းကျ (အမျိုးသား)၊ အဖြူဆင်းခြင်း(အမျိုးသမီး)။ ဒီ ဘက်တီးရီးယားက မိန်းမကိုယ်ထဲနဲ့ အမျိုးသားဆီးလမ်းကြောင်းထဲမှာ ပေါက်ပွားပါတယ်။ ကိုယ့်မှာ ဒီပိုး ရှိနေပြီဆိုရင် ရောဂါလက္ခဏာ ဘာမှမပြပေမယ့် မိန်းမကိုယ်အလွန်ယားယံခြင်းနဲ့အတူ အလွန်နံတဲ့ ဖြူဝါဝါအရောင် အမြှုပ်များဆင်းခြင်း (အဖြူဆင်းခြင်း) ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အမျိုးသားတွေမှာဆိုရင် ဆီးသွားတဲ့အချိန်မှာ ပျားတုပ်ခံရသလိုမျိုးကိုက်တာ (ဆီးပူညောင်းကျ) ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဂနိုရီယာ ‘ဂနို’ လို့ လူသိများကြပါတယ်။ Neisseria Gonorrhoeae ဆိုတဲ့ ဘက်တီးရီးယားကြောင့် ဖြစ်တာပါ။ ဆီးလမ်းကြောင်း၊ လိင်အင်္ဂါ၊ သားအိမ်ခေါင်း၊ သားအိမ်နံရံ၊ သားအိမ်ပြွန်၊ စအို၊ မျက်လုံး၊ ပါးစပ်နှင့်လည်ချောင်းတွေမှာရှိတဲ့ အချွဲအမြှေးပါးတွေမှာ ပေါက်ပွားပါတယ်။
Human papillomavirus (HPV) လိင်အင်္ဂါမှာပေါက်တဲ့ ကြွက်နို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးအစားပေါင်း ၁၀၀ကျော် ရှိပါတယ်။ ၅၀ ကနေ ၇၀% ဟာ လိင်ဆက်ဆံရာကနေတစ်ဆင့် အများဆုံးကူးစက်ပါတယ်။ လိင်အင်္ဂါ အရေပြားပေါ်မှာ ယားဖုနီ သေးသေးလေးကနေ စဖြစ်လာတာကနေ တဖြည်းဖြည်း ကြီးလာပြီး နောက်ပိုင်း ဂေါ်ဖီပန်းပွင့်ပုံသဏ္ဌာန်ကြီးအထိ ဖြစ်လာပါတယ်။
လိင်အင်္ဂါ ရေယုန် (HSV-1) နဲ့ (HSV-2) ဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ ရေယုန်ဗိုင်းရပ်စ် ကြောင့် ဖြစ်တာပါ။ Type2ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ အဓိက အဖြစ်များပါတယ်။ အရေပြား၊ ပါးစပ်နဲ့ အမျိုးသမီးအင်္ဂါတွေမှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အခြားကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းတွေကိုလည်း ကူစက်သွားတတ်ပါတယ်။ နောက်ဆက်တွဲအသက်အန္တရာယ်အထိ ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ သေးငယ်တဲ့ ပြည်ဖုကလေးတွေ စ ဖြစ်လာပြီး တဖြည်းဖြည်း နီရဲ ရောင်ရမ်းလာပါတယ်။
ဆစ်ဖလစ် ဆစ်ဖလစ်က Treponema pallidum ဘက်တီးရီးယားကြောင့် ဖြစ်တာပါ။ ဒီ ဘက်တီးရီးယားက လိင်အင်္ဂါ၊ ဆီးလမ်းကြောင်း၊ ပါးစပ်၊ မျက်လုံး၊ အရေပြားပေါ်က အနာ တွေကနေ တစ်ဆင့် ကူးစက်ပါတယ်။
အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီပိုး နဲ့ စီပိုး ဒီကူးစက်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးက အသည်းဆဲလ်တွေထဲကို ရောက်သွားပြီးအသည်းကို ရောင်ရမ်းစေပါတယ်။ အန္တရာယ်ကြီးတဲ့ရောဂါဖြစ်ပြီး ဘာလက္ခဏာမှ မပြဘဲ ခိုနေတတ်လို့ တစ်ချို့လူနာတွေဆို အစပိုင်းမှာ ကိုယ့်မှာ ဒီပိုး ရှိနေမှန်းတောင် သိကို မသိကြပါဘူး။
ဘေးကင်းလုံခြုံသော လိင်မှုရေးရာအတွက် ထိရောက်သော နည်းလမ်းများ
၁. ကွန်ဒုံ အသုံးပြုပါ
လွယ်ကူမှုနဲ့ ထိရောက်မှုကိုတော့ လူတိုင်းလောက်နီးနီး သိထားပြီးသားပါ။ လိင်မှုကိစ္စ ဆောင်ရွက်စဉ်မှာ ကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်းဖြင့် မလိုချင်သောကိုယ်ဝန်ရရှိမှု နဲ့ လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်တဲ့ ရောဂါတွေ ကနေ ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ ခုဆိုရင် အမျိုးသမီးသုံးကွန်ဒုံးတွေ ပေါ်နေပြီဖြစ်ပေမယ့် ထိုင်းမှာတောင် သိပ်တော့ ခေတ်မစားသေးပါဘူး။ မိန်းကလေးငယ်တွေအနေနဲ့ မိန်းမသုံးကွန်ဒုံး အသုံးပြုပုံကို လေ့လာထားသင့်ပါတယ်။
ကွန်ဒုံးဆိုတာ အမျိုးသားရဲ့ သုက်ပိုးသုက်ရည်တွေ မိန်းမကိုယ်ထဲ ဝင်မသွားရအောင် ကာကွယ်ပေးထားတဲ့ အစွပ်ကလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အရည်အသွေးကောင်းမွန်တဲ့ ရာဘာသားရေနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတာမို့လို့ လိင်မှုကိစ္စ ဆောင်ရွက်နေစဉ်အတွင်းမှာ ပေါက်သွားတာ ပြဲသွားတာမျိုး မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ စျေးလည်းမကြီးဘဲ အလွယ်တကူလည်း ဝယ်လို့ရပါတယ်။ ကွန်ဒုံးကြောင့် အသုံးပြုသူအတွက် အခြားကျန်းမာရေးပြဿနာတွေ ဖြစ်လာတယ် လို့လဲ မကြားမိ သေးပါဘူး။
သန္ဓေတားဆေးလုံးလေးတွေကတော့ အမျိုးသမီးတွေ ကိုယ်ဝန်မရအောင် အသုံးပြုကြပါတယ်။ ဒီဆေးမှာ သားအိမ်မှာ သားဥ မတွယ်စေဖို့ ဟိုမုန်းတစ်မျိုး ဒါမှမဟုတ် ပေါင်းစပ်ဟိုမုန်းတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ တစ်ချို့ကလည်း အကျိအချွဲတွေ ဖြစ်လာပြီး သားအိမ်ခေါင်းကို ဖုံးအုပ်ပေးထားတာမို့ ဝင်လာတဲ့ အမျိုးသားသုက်ပိုးနဲ့ အထဲက အမျိုးသမီး သားဥတို့ ကြားမှာ ကန့်လန့်ကာခြားထားသလို ဖြစ်စေတာမို့ သန္ဓေအောင်ဖို့ မဖြစ်မြောက်နိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ဝန် မတည်နိုင်ပါဘူး။ လူသိများတဲ့ တားဆေးတွေကတော့ ၂၁ လုံး / ၂၈လုံး ပါတဲ့ ကတ်ကလေးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အရေးပေါ်တားဆေးကို တကယ့်အရေးပေါ် (အကာအကွယ်မဲ့ အတူတူနေလိုက်မိတဲ့အခါမျိုး) နဲ့ အခြား အလျင်လိုတဲ့ အခြေအနေမျိုး (ကွန်ဒုံး ပြဲသွားတာတို့ ဘာတို့) စတဲ့ အခါမျိုးတွေမှာပဲ သုံးသင့်ပါတယ်။ တစ်ကဒ်မှာ ဆေး ၂ လုံးပါ ပါတယ်။ တစ်လုံးက အတူနေပြီး ၂၄ နာရီအတွင်း သောက်ရမှာဖြစ်ပြီး ဆေးအာနိသင် အစွမ်းကုန်ထိရောက်စေဖို့ ဒုတိယတစ်လုံးကို နောက် ၁၂ နာရီ အကြာမှာ ထပ်သောက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးနှစ်လုံးစလုံးသောက်ပြီး တစ်ပတ်အကြာမှာ ဓမ္မတာ လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆေးမှာ အန်ခြင်း၊ မူးဝေခြင်းစတဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလေးတွေ ရှိပါတယ်။ ဆေးသောက်ပြီး ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ လက္ခဏာတွေ ပြလာတာ ရှိရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ အမြန်ဆုံး ဆွေးနွေး တိုင်ပင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့ခေတ်ဟာ အလွန်ပွင့်လင်းပြီး သွက်လက်တဲ့အတွက် ဆယ်ကျော်သက်တို့အဖို့ အချင်းချင်း တွေ့ဖို့ဆိုတာ အရင်ကထက် အများကြီး လွယ်ကူပါတယ်။ မလွှဲမေရှောင်သာတဲ့ နောက်ဆက်တွဲကတော့ လိင်မှုရေးရာတွေ ပါလာတာပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဆယ်ကျော်သက်တို့အနေနဲ့ မလိုလားအပ်တဲ့ ဘေးအန္တရာယ်နဲ့ ဒုက္ခတွေကနေ ရှောင်လွှဲနိုင်စေဖို့ အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ဗဟုသုတတွေကို လေ့လာသိရှိထားသင့်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းတွေနဲ့ မလိုချင်တဲ့ ကိုယ်ဝန်ရရှိမှုနဲ့ လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်တတ်တဲ့ရောဂါတွေကနေ ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီနည်းလမ်းတွေအားလုံးဟာ ၁၀၀% ရာနှုန်းပြည့် အကာအကွယ်ပေးမယ်လို့တော့ အာမ မခံဘူးနော်။ ဒါကြောင့် လိင်မှုရေးရာဆိုတာကို အချိန်ကိုက် အရွယ်ကိုက် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးကလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်လိုကာကွယ်ရမယ်ဆိုတာကို ကောင်းကောင်းသိတဲ့ အရွယ်ကျမှပဲ စိတ်ဝင်စားကြပါလို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ် သားတို့ သမီးတို့ ရေ….
ဆယ်ကျော်သက်ရွယ် စိတ်ကစားလွယ် ဆယ်ကျော်သက်ရွယ် လူငယ်ဘ၀ ဆိုတာကို မိန်းကလေးတွေမှာ ၁၀ နှစ်ကနေ အသက် ၂၀၊ ယောက်ျားလေးတွေကျတော့ ၁၂ နှစ်ကနေ ၂၂ နှစ်လို့ သတ်မှတ်လေ့ ရှိကြပါတယ်။ ဒီအရွယ်အတွင်းမှာ သူဟာ ရုပ်ပိုင်း၊ စိတ်ခံစားမှုပိုင်း၊ စိတ်ကျန်းမာရေးအပိုင်း၊ လူမှုဆက်ဆံရေးရှုထောင့် စတဲ့ ကဏ္ဍတော်တော်များများမှာ အပြောင်းအလဲတွေ အများကြီး ဖြစ်လာရပါတယ်။
User rating:3out of5with 15 ratings
Assist. Prof. Phongthorn Virojchaiwong, M.D.
Summary: Obstetrics And Gynaecology Reproductive Medicine